UYIFUNDA NJANI ITSHATI YOKUZALWA | I-LUNAR ASTROLOGY - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwabaqalayo: Uyifunda njani iTshati yokuzalwa njengeNkwenkwezi
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwabaqalayo: Uyifunda njani iTshati yokuzalwa njengeNkwenkwezi
Isibali-mahala seTshati yokuZalwa | Funda ukuba imiqondiso yezodiac, izindlu, kunye neeplanethi zithetha ntoni ngesi sikhokelo sipheleleyo.
Ukuvumisa ngeenkwenkweziNge-13 kaOkthobha, ngo-2021
Ngaba ukulungele ukunxibelelana necala lakho lokomoya? Nokuba ungumvumisi ngeenkwenkwezi wokwenyani njengam okanye ujonge imbono yokuba iinkwenkwezi zinokukunceda ufumane umdlalo wakho ogqibeleleyo; kukho ubugcisa bokufunda itshathi yokuzalwa.
Ithetha ukuthini iTshati Yakho Yokuzalwa, Phofu?
Itshathi yakho yokuzalwa yahlukile kuwe kwaye ibonisa iindawo zakho zamandla kunye nobuthathaka, indlela onxibelelana ngayo nabanye, kwaye inokubonelela ngokuqonda kubomi bakho bothando.
Iiplanethi kwi-y itshathi yethu yokuzalwa nganye ibalaselisa inxalenye eyahlukileyo yobuntu bakho , iinqobo ezisemgangathweni, unxibelelwano noluntu, amaphupha, kunye neminqweno.
Nganye kwezo planethi ziya kuwa phantsi kweempembelelo zophawu olwahlukileyo lwezodiac. I uphawu lwezodiac iplanethi iwela kwimiboniso indlela amandla ale planethi aya kusebenza ngayo .
Yonke iplanethi, ukukhanya, iasteroid, kunye nendawo yetshathi kwivili lakho lendalo iya kuhlala enye yezindlu ezili-12 kwitshathi yakho yokuzalwa. Ezi izindlu nganye imele indawo enkulu eyahlukileyo yobomi bakho.
Abanye abaqalayo benza impazamo yokucinga ukuba uluhlu olubhaliweyo lweeplanethi kunye needigri ezininzi iiwebhusayithi zokuvumisa ngeenkwenkwezi zivelisa itshati yabo yokuzalwa - kodwa akunjalo. Itshathi yakho yokuzalwa epheleleyo ibhekisa kwelona vili lokuzalwa kunye neeplanethi zakho, izindlu, kunye nemiba.
IKhatyhuleyitha yeTshati yokuzalwa yasimahla
Uya kufuna izinto ezintathu zokufunda itshathi yakho yokuzalwa: ixesha lakho lokuzalwa, indawo yakho yokuzalwa, kunye nosuku lwakho lokuzalwa. Emva kokuba ufumene olo lwazi unako sebenzisa esi sixhobo ukusuka abahlobo bethu kwi-Astro-Charts ukufumana itshathi yakho yokuzalwa yasimahla:
yintoni ilanga lam kunye nomqondiso wenyanga
I-AFFILIATE DISCLOSO: iwijethi enikiweyo ISIXHOBO SAMAHHALA. Ukuba ukhetha ukuthenga ingxelo ehlawulweyo nge-Astro-Charts.com; Ndingafumana ikhomishini edibeneyo. Intlawulo ayifunyanwa ngathi. Nceda uqhagamshelane: admin@astro-charts.com ngemibuzo.
Iimpawu zeZodiac kwiTshati yokuZalwa
Mhlawumbi unophawu lwakho lweLanga ngeli xesha - kodwa itshathi yakho yokuzalwa eneneni ineeplanethi ezilishumi eziphambili kunye nezikhanyiso. Eyakho itshathi yokuzalwa lufiphalo apho iiplanethi nganye kwitshathi yakho zazisesibhakabhakeni ngexesha elichanekileyo ukuzalwa .
Ke - xa usithi iLanga lakho liku-Aquarius; ngokwenene uthi iLanga lalingumqondiso we-Aquarius kanye ngexesha lokuzalwa kwakho. Oku kuyinyaniso kuyo yonke enye iplanethi kwitshathi yakho yokuzalwa (iNyanga, iMercury, iMars, iVenus, njl.) - yonke indlela eya ePluto.
Ziintoni Izindlu kwi-Astrology?
Impembelelo yeempawu zezodiac ayipheli ngeeplanethi. Itshathi yakho yokuzalwa yahlulahlulwe yangamacandelo alishumi elinambini - aziwa ngokuba zizindlu - zizonke ziyi-360 ° - kwaye ngenxa yokuba uphawu ngalunye lweshumi elinesibini lumelwe kwitshathi yakho, uphawu ngalunye lwezodiac luya kuba necandelo lendlu kwitshathi yakho yokuzalwa.
Esinye sezona zigqibo zikhulu zizazi ngeenkwenkwezi ezintsha kukhetha inkqubo yendlu abangathanda ukuyifundela. Izindlu ngokuvumisa ngeenkwenkwezi azilungiswanga ngokweenkwenkwezi kuba zisekwe kuphawu lwakho lokunyuka, okuthetha ukuthi abavumisi ngeenkwenkwezi bale mihla basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokwahlula izindlu kwitshathi yakho yokuzalwa.
Nantsi imbono ekhawulezayo yezona nkqubo zidumileyo zendlu ezisetyenziswa ngabavumisi ngeenkwenkwezi banamhlanje kuzo zombini iinkwenkwezi zaseNtshona kunye neVedic:
I-Placidus yeyona nkqubo yendlu isetyenziswa kakhulu ekuvumiseni ngeenkwenkwezi kwanamhlanje. Isekwe kwinkqubo yolwahlulo lwendlu olubala izindlu kusetyenziswa inkqubo eyahlulahlula umgama kunye nexesha phakathi kweMidiya kunye noKunyuka.
I Inkqubo yoMqondiso epheleleyo Ukwahlula ivili le-zodiac kunye nezindlu zibe ngamacandelo apheleleyo angama-30 ° - kunye nendlu yokuqala iqala ngo-0 ° nakweyiphi na indawo ehlala kwi-cusp ye-ascendant.
Umzekelo: Ukuba unguLeo Rising, indlu yakho yokuqala iya kuba seLeo, indlu yakho yesibini iya kuba seVirgo, indlu yakho yesithathu iya kuba seLibra, njl.
ISidereal ngeenkwenkwezi yahluke kancinane kuneyokuvumisa ngeenkwenkwezi kwaseNtshona; kungenxa yokuba inkqubo sidereal isekelwe phezu yangoku indawo ekuma kweenkwenkwezi . Kukho umahluko ongamashumi amabini anesine phakathi kwenkqubo yecala kunye nenkqubo yetropiki.
FUNDA OKUNGAKUMBI: Ezona nkqubo zidumileyo zeNdlu kwi-Astrology
Ziintoni iiplanethi kwi-Astrology?
Iplanethi nganye ilawula inkalo eyahlukileyo yobomi bakho yiyo loo nto iyindawo entle yabaqalayo ukuba baqale. Yonke iplanethi inomlawuli wezodiac enika impembelelo ekhethekileyo kunye nokukhanya. Itshathi yakho iya kuchaphazeleka kakhulu ukuba zeziphi iimpawu zezodiac eziwela kuzo iiplanethi kwitshathi yakho yokuzalwa.
Nalu ujongo olukhawulezayo lokuba iplanethi nganye ithetha ntoni kwitshathi yakho yokuzalwa:
IiPlanethi zoBuqu :
ILanga - Ukubekwa kwe-Self & Ego
INyanga-Ukubekwa kweMvakalelo kunye neMvo
IMercury – iPlanethi yeNgqiqo kunye noNxibelelwano
IVenus-iPlanethi enomtsalane kunye nezothando
IMars-iPlanethi yoMnqwenelo kunye namabhongo
Iiplanethi zeNtlalo :
Jupiter – IPlanethi yeThamsanqa kunye noKwandiswa
ISaturn-iPlanethi yeKarma kunye nokuKhula
IiPlanethi eziHlanganisiweyo :
I-Uranus-iPlanethi yemvukelo kunye noTshintsho
INeptune-iPlanethi yenkohliso kunye noKwazisa ngokuHlangeneyo
IPluto-Iplanethi yokufa kunye noTshintsho
I-3 enkulu - Ilanga, iNyanga, i-Ascendant
Ngokuvumisa ngeenkwenkwezi, iBig 3 yakho ibhekisa kwiLanga, iNyanga, kunye nokubekwa kweAscendant kwitshathi yakho yokuzalwa .
Umqondiso wakho weLanga yinxalenye yobuntu bakho obuchitha ixesha elininzi kwindawo ebonakalayo. Ngundoqo wokwenyani wesiqu sakho.
Umqondiso wakho weNyanga umele ubuyena bangaphakathi kunye neemvakalelo. Ihlala ibhekiswa kubuntu bakho obufihliweyo.
Umqondiso wakho wokunyuka ubonisa indlela abanye abantu abakubona ngayo nabakubona ngayo. Yimaski esiyinxiba xa siqala ukudibana nabantu.
Uya kufuna ukufunda ukuba loluphi uphawu lwezodiac oluwela kwi-Big 3 yakho nganye kwaye usebenzise iimpembelelo zezo zibonakaliso ze-zodiac kwiplanethi yakho nganye. Phinda le nkqubo kwiplanethi nganye kwitshathi yakho de ube ujonga ngokupheleleyo kwitshathi yakho yokuzalwa.
Kunye nezijikelezi-langa zamandulo ezamkelwa ngabavumisi ngeenkwenkwezi banamhlanje, kukho ezinye iinkwenkwezi eziwelayo nezingathandwayo ngabantu abavumisayo, kuxhomekeka ekubeni ubuza bani na. Ezi zidalwa zasezulwini zibizwa ngokuba ngamanqaku akhethekileyo kunye ne-asteroids. La manqaku anokunika ulwazi olongezelelweyo kwindlela yakho yobomi kunye nemixholo emikhulu.
Amanqaku adumileyo ngokuvumisa ngeenkwenkwezi kunye noko bakumelayo:
Ceres ibalaselisa indlela obakhulisa ngayo abanye kwaye unokumela ubumama, ukuzalwa komntwana, ubudlelwane bentsapho, nokunye.
iChiron : imele elona nxeba lakho linzulu kwaye ibonisa indlela osondela ngayo ukuziphilisa loo manxeba, inokubonisa nokuba zeziphi iindawo ebomini othanda ukuzihlawula ngaphezulu
Eros & Psyche ibonisa amandla e-zodiac obonakala utsaleleka kuwo kwiqabane lakho - ezinye izazi ngeenkwenkwezi zibhekisa kwezi zimbini njengonxibelelwano lomphefumlo-qabane.
Juno imele umtshato, ukuzibophelela, kunye nendlela amandla akho abonakala ngayo kubudlelwane obuzibophelele bexesha elide. Kwi-synastry inokubonisa ukuba loluphi uhlobo lweqabane olitsalayo.
Esazulwini sezulu (MC) : enye yee-engile ezine eziphambili kwitshathi, imele ikhondo lakho lomsebenzi okanye indlela yobomi, kunye nomfanekiso wakho woluntu kunye nenqanaba lentlalontle.
Pallas sibambe isitshixo kubukrelekrele bakho, ukomelela kwengqondo, ukucinga ngobuchule, kunye nezakhono zethu zokusombulula iingxaki. UPallas Athene umele umlo kwitshathi yakho yokuzalwa.
Indawo eseMantla : imele amava kunye neempawu ezingezi ngokwemvelo kuwe kwaye kuya kufuneka uphuhlise ukuze ukhule njengabantu.
Vesta imele ezona zinto uzigqala njengezingcwele entliziyweni yakho. IVesta inokubonisa ukuba zeziphi iinkalo zobomi esityekele ekuzinikeleni ngokupheleleyo kuzo.
ithini itshathi yam yokuvumisa ngeenkwenkwezi
iinwele ze-cornrow zamadoda
luthini umqondiso wakho wokunyuka
iinwele ezintle zamadoda amnyama
Crew Sika iinwele zamadoda